40 mitsara nezve shanje | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Maria Jose Roldan | 19/04/2021 19:33 | Mitsara
Kana iwe wakambonzwa shanje, iwe uchaziva kuti hazvifadzi kuinzwa. Zvinowanzoitika patinoona kuti mumwe munhu ane hunhu, hwakanaka kana chero chinhu chatingave tichida uye chatisina. Kunyangwe iri manzwiro emunhu, tinoiona seisingafadzi uye Iyo inogadzira kusagadzikana kwepfungwa uye kusavimba kune vamwe vanhu.
Munhu anga achibudirira muhupenyu anogara achimutsa godo kubva kune vamwe vanhu vakamukomberedza. Vane godo havagone kumira kuti vamwe vakabudirira kupfuura ivo.
Izvo zvakare zvinogona kuti kana usiri munhu ane godo, wakambosangana nemunhu akanzwa godo kwauri. Zvakaoma kubata nemhando idzi dzemamiriro, kunyanya kana ivo vanhu vane godo varipo pauri kazhinji muhupenyu hwako. Zvakare, vanhu vane godo vanonzwa kutyisidzirwa zvisina basa nguva dzose.
Chii chinonzi shanje
Kuziva munhu ane shanje hakusi nyore nguva dzose. Aya manzwiro ehukama anokonzera kusagadzikana uye anowanzoitika kana hukama husina kuenzana hwaonekwa (ngazvive zvechokwadi kana kwete). Iyo inogara iine hukama nekuenzanisa nevamwe vanhu. Kana tichinzwa shanje zvakafanira kutora matanho.
Dzimwe nguva unogona kushandisa iyo godo sechiratidzo chekuyemura, asi kana shanje dzikanyanya kuipa, dzinowanzohwanda. Nenzira iyi ane godo anovanza kushaiwa kwake uye anozvidzivirira, zvinodzivirirawo munhu anegodo kuti asanzwe achityisidzirwa nenzira ipi neipi, nekuti kunzwa kweshanje kunoita kuti shanje dzinzwe saizvozvo.
Kana iwe wakambonzwa godo, chinhu chakanakisa chaungaite kushanda mukati mako kuti utende nezvezvauinazvo uye ubvise parutivi kunetseka nezve izvo zvausina.
Mitsara pamusoro pegodo
Isu tinoziva kuti pane imwe nguva muhupenyu, kana zvinhu zvikakufambira zvakanaka, vanhu vanozoda izvo zvaunazvo uye kune vanhu vane huipi kuti vanonakirwawo kana zvinhu zvikakuipira. Zvekuti iwe unzwisise zviri nani shanje uye zvazvinokonzeresa, usarasikirwa nemitsara iyi nezvegodo kuti iwe ugone kuona zvinhu neimwe nzira uye kuti kuratidzwa kunotsamwiswa nemitsara iyi kuchakubatsira iwe kuvandudza muhupenyu.
Rangarira kukosha kwekutevera nzira yako kubva pakutenda uye nemutsa. Uye kana iwe uchigashira godo kubva kune vamwe, yeuka kuti zviri nani kuti urege kunzwa zvakashata, nekuti shanje ishutu rinotarisirwa zvakanaka. Usapotsa aya mitsara.
Zvakaipa zvinofamba zvakabatana pamwe negodo rinozvikonzera.
Shanje dzedu dzinogara kwenguva yakareba kudarika mufaro weavo vatinochiva.
Ndiani asina godo, haana kukodzera kuve.
Hasha dzinokuvadza, uye kutsamwa kunotyisa; Asi ndiani angamira pamberi pegodo? Anochengeta muromo wake, anochengeta hupenyu hwake; Asi anoshamisa miromo yake, achava nenjodzi.
Murume asingagodorwi haasi kufara.
Icho chiratidzo chechokwadi chekuti munhu ane hukuru hunhu hunhu ndeyekuti akazvarwa asina godo.
Kungwarira kunodzora godo negodo, nekuti nekutarisa pane izvozvi uye ikozvino, kunetsekana nezve 'kunofanirwa kuve' kunonyangarika.
Kuchera ndiye mwanasikana wekusaziva uye mapatya hanzvadzi yegodo.
Chirango chikurusa chinogona kuiswa pagodo kuzvidza. Kumuteerera ndiko kumutendera kuti anakirwe nechiratidzo chekukunda.
Shanje ibenzi nekuti hapana munhu anofanirwa neshanje.
Shanje musoro wanyanya chiSpanish. Vanhu veSpanish vanogara vachifunga nezvegodo. Kutaura kuti chimwe chinhu chakanaka vanoti: "Inogodoka."
Mune vamwe vanhu minda, goho rinogara rakawandisa.
Kunyarara kwevane godo kwakazara nemheremhere.
Shanje ndiye anonyanya kuvenga mhandu.
Shanje dzinofanirwa kukodzera kuita humbwende kushinga.
Vese vadzvinyiriri veSicily havasati vambogadzira kutambudza kukuru kupfuura shanje.
Kana munhu achinge asiya shanje anotanga kuzvigadzirira kuti apinde munzira yemufaro.
Godo rine hutano haripo: zvinosuwisa, godo rese rinokonzera kusagadzikana uye zvinokuvadza kuzadzisa zvinangwa zvedu.
Shanje ndiwo mutero unobhadharwa kune tarenda.
Shanje dzeshamwari dzakaipa kupfuura kuvenga muvengi.
Shanje ndihwo hunyanzvi hwekukoshesa zvinoitwa nevamwe kupfuura zvako.
Shanje ndiyo gomarara retarenda. Kusava neshanje iropafadzo yehutano yekutendwa kunamwari kupfuura hutano hwepanyama.
Shanje ipuroteni. Kuratidzwa kwaro kwakajairika kushoropodza, kusekesa, diatribe, kutuka, kuchera, kunyepa kwekunyepedzera, kunyepedzera kunzwira tsitsi, asi chimiro chayo chakaipisisa kubata kumeso kwehuranda.
Shanje hasha dzinoda kungozvishandura seyakare mushambadzi.
Usatadzira zvaunazvo nekuda izvo zvausina.
Ndine imbwa nhatu dzinotyisa: kusaonga, kudada negodo. Kana imbwa nhatu idzi dzichiruma, ronda racho rakadzika kwazvo.
Rarama usina godo uye usingashuve runyararo runyararo kwemakore mazhinji, muhukama nevezera rako.
Vakanyanya kusachengeteka vanoedza kuodza moyo vamwe kuti vasanzwa zviri nani pamusoro pavo.
Rudo runotarisa kuburikidza neteresikopu ... shanje kuburikidza nemaikorosikopu.
Munhu ane godo haaregerere hunhu.
Ndivenge, nditonge, undishoropodzi… pakupedzisira, zvese zvinoreva zvakafanana: hauzombove seni.
Kunzwa shanje kuzvituka.
Haugone kufara uye kugodora panguva imwe chete ... sarudza zvaunoda kuve.
iye mufaro weumwe igodo rezviuru vasina kuzviita.
Shanje dzakafanana nekutora muchetura uye kumirira kuti mumwe munhu afe.
Ukadzi haisi pfungwa isinganzwisisike, ndiko kuda kuenda kumberi kwete kumashure; ibva pakusaziva uye negodo.
Usakoshesa zvaunogamuchira, kana kuchiva vamwe. Uyo anochiva vamwe haazowana rugare rwepfungwa.
Paunonongedza munwe mumwe, yeuka kuti mimwe minwe mitatu iri kunongedza kwauri.
Shanje hadzishandiswi kuyemura.
Uye pane ese aya mitsara, ndeupi waunofarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » 40 mitsara pamusoro pegodo
Akanaka kwazvo uye akabudirira mitsara. Ndinozvigadzirisa zvizere.
Ngatiregei kuchiva chero munhu. Uye isu tinogara tichionga izvo zvatinazvo, kunyangwe zviri zvishoma.